Onye isi ala İmamoğlu nyochara ọdụ ọdụ ụgbọ ala Harem hapụrụ ibibi | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulOnye isi ala İmamoğlu na-enyocha ọdụ ụgbọ ala Harem hapụrụ ibibi
Onye isi ala İmamoğlu na-enyocha ọdụ ụgbọ ala Harem hapụrụ ibibi
Onye isi ala bụ onye nyochaworo ọdụ ụgbọ ala harem gbahapụrụ maka ọdịnihu ya
Onye isi ala remBB Ekrem İmamoğlu gara na ọdụ ụgbọ ala Harem. Imamoğlu gere ntị na ọdụ ụgbọ ala ma gee ntị na nsogbu nke ndị azụmaahịa ahụ wee sị, “Anyị agaghị ahapụ akara gị. N'ebe a, anyị ga-eleba anya otu esi eme mkpebi kacha baa uru n'aha obodo. "
Imamoglu kwagara Kemerburgaz City Forest nke ọ gara na Septemba gara aga mgbe nleta 8 gasịrị. Imamoglu kwuru nkwupụta nke ndị nta akụkọ ahụ mgbe ha jesịrị ije n'ime ọhịa ruo nwa oge wee sị, "Anyị ga-amalite iwere ụmụ amaala anyị ebe a site na Ọktoba na 16. N’ọnwa Ọktọba, 29 Culture na Egwuregwu Inc. ga-ahazi ihe omume dị iche iche. Anyị ga-ahụ ọdịdị ala nke Istanbul. M ga-anọkwa ebe a. ”
Onye isi obodo Metropolitan (IMM) Onye isi ala Ekrem Imamoglu, hapụrụ ihe ọdị afọ ahụ, ụmụ amaala na ndị ọrụ mkpesa na ọdụ ụgbọ ala Harem gara nyocha. IMAMOGLU sokwa ya bụ Secretary General General Yavuz Erkut, osote onye isi Secretary Murat Yazici, Orhan Demir, Murat Kalkanli na Mehmet Cakilcioglu.
ANY W GA-EME ERYB FR F FBỌCHERY AHERY
Imamoglu, onye natara ozi n’aka Kemal Kolaçoğlu, Onye isi ndị ahịa ọdụ ụgbọ ala nke Harem, banyere ọnọdụ ọhụụ nke ọdụ ụgbọ ala ahụ, kwuru, sị: “Ihere na-echegbu Istanbul ebe a. Obi adighi gi nma. Ndị ahịa anyị na ụmụ amaala anyị na-agwa anyị banyere erughị ala ebe a. N'ebe a, mma ahụ 'na-emegide ọkpụkpụ'. Will ga - ahụ ngwa ngwa ị ga - eso ụzọ. Enweghị nchekasị. ”
N'ikwu na ọdụ ọdụ ụgbọ ala nke Harem arụchaa ndụ ya, İmamoğlu kwuru, "Anyị ga-ahụ ebe a. Anyị agaghị ahapụ akara gị. Lee, anyị lere anya otu esi eme mkpebi ziri ezi maka obodo. Harem emechaa ndu ya. Mana ọ bụ ihe nwute na okwu a anọwo n'ọnọdụ amaghị nke a kemgbe ọtụtụ afọ. Ya mere, ebumnuche anyị ọzọ ọsọ ọsọ, ọzọ n'ime ihe ọmụma gị iji mepụta ụzọ kachasị kwesịrị ekwesị ebe a ma soro gị kerịta.
A B H M EMI N’ETITI 29
Imamoglu kwagara Kemerburgaz City Forest nke ọ gara na Septemba gara aga mgbe nleta 8 gasịrị. Imamoglu, ya na onye ode akwukwo ukwu nke IMM, Yavuz Erkut na Ethem Piskin, onye isi njikwa Bogazici Management Inc., wee ruo oge nwa oge, kwupụtara nkwupụta nye ndị otu akụkọ ahụ.
16 Imamoglu, onye nyere ozi ọma na ụmụ amaala nke Kemerburgaz City Forest ga-amalite iwere dịka Ọktoba kwuru, yürüyüş Ọ dịkarịa ala, a ga-ekpebi ebe ịga ije na ụzọ ga-ekpe ikpe ".
Anyị ga-emepe otu mpaghara bara uru maka iji ụmụ amaala anyị ma chebe ya ọnụ "29 ga-ahazi ihe omume dị iche iche maka ezinụlọ ebe a na Ọktọba. Ya mere, na October Republic Day, 29, anyị ga-ahụ ọdịdị ala nke Istanbul. Aga m anọ ebe a. Anyị chọrọ ka ọ mepee ozugbo enwere ike. Ọ ga-eburu ibu nke Belgrade Forests ma buru ibu karịa Belgrade Forests. ”
ANY W GA-EGO NA-AK TRTA N'CLỌ EGO
N'ịchọpụta na Kemerburgaz City Forest bụ ebe dị n'etiti etiti obodo, İmamoğlu kwuru, "Site na TEM, ọ bụ n'akụkụ ebe ị nwere ike ị nweta ngbanye n'ụzọ dị mfe n'okporo ụzọ na-eduga Kemerburgaz na Göktürk. N'aka nke ọzọ, ọ dị nso na mpaghara Alibeyköy, Gaziosmanpaşa na Kağıthane. Ọbụna enwere ike iru Esenler ebe a. Ọzọkwa, anyị ga-akwado ụgbọ njem ọha na ụbọchị ụfọdụ. Akụkụ ọzọ bụ nkwụsị nke Mecidiyeköy - Ọdụ ụgbọ elu Metro na kilomita 2.5 site na ebe a. Site ebe ahụ, anyị ga-etinye ọrụ bọs mgbanaka, nke ga-agbanwe gaa mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ebe ị nwere ike ịbịa gaa dị ka ezinụlọ, mee egwuregwu ma kuo ume nke ukwuu na obodo. Mpaghara ahịhịa ndụ dị n'etiti obodo ahụ na mpaghara njem, njem ụgbọ mmiri. Onwere ihe ịtụnanya anyị n’eche maka egwuregwu. Ọ sịrị, Anyị ga-ezute otu ogige ntụrụndụ gaa obodo.
A na-ahapụ Savarona nke ụgbọ okporo ígwè na ọdịda ya
Ebe obibi Ha Bus na-aga Pendik
Onye Isi İmamoğlu Bayrampaşa ilen
İmamoğlu gara njem na Esenler Bus Station na Bayrampaşa:…
Awara ụgbọ okporo ígwè na Paris 80 afọ gara aga
Mayor İmamoğlu: 'Ọmụmụ banyere okporo ụzọ okporo ụzọ…
Onye isi ala İmamoğlu abanyela ụgbọ ahụ; Citizens ...
Onye isi obodo ğmamo inlu dị na Beşiktaş Ebe a na-egwu egwu…
Onye isi İmamoğlu '24 Hour Transportation to Istanbulites…
Onye isi oche İmamoğlu, 'Haliç Shipyard Aro
Ụlọ Bus Bus Harem
Taa na History: 18 September 1918 Tulukenem dara
Obodo Obodo nke Istanbul mere ihe maka Kadıköy Sultanbeyli Metro Line